James Swan: Dhacdadii 19-kii February waxay carqaladeysay shir... | Universal Somali TV
James Swan: Dhacdadii 19-kii February waxay carqaladeysay shirkii Muqdisho
James Swan, Wakiilka Qaramada Midoobey ee u qaabilsan arrimaha Somaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka, xilli uu uga warbixinayay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Wakiilka ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee sii cakirmeysa ee dalka, ay halis ku tahay horumarkii laga sameeyay dib-u-dhiska Dowladnimada Somaliya iyo amnigaba.
Sidoo kale waxa uu walaac ka muujiyay isku dhacyadii Magaalada Muqdisho, xeeladaha cadaadiska iyo awood muujinta dowladda ay halis ku tahay xaaladda dalka, xilli sida uu sheegay uu kordhayo loolanka afka ee dhinacyada u dhaxeeya.
James Swan ayaa tilmaamay in isku dhacyadii 19-kii bishan ka dhacay Magaalada Muqdisho ay carqaladeeyeen shirkii lagu qaban lahaa buu yiri Muqdisho.
Swan ayaa muujiyay in xaaladda taagan looga gudbi karo heshiiskii 17-kii bishii September ay Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ku gaareen Caasimadda Muqdisho, oo jiheynaya doorashooyinka dalka, isla-markaana uu heshiiskaasi yahay kan qura ee lagaga bixi karo dib-u-dhaca ku yimid doorashada.
Swan ayaa ku celiyay inaanay aqbali doonin doorasho lagu kala qaysan yahay oo dalka laga qabto, isagoo intaa ku daray inay ka shaqeynayaan, sidii Maamulada Puntland iyo Jubbaland ugu sii biiri lahaayen shirka Muqdisho, isla-markaana uu ku baaqaayo in Soomaalidu wadahadlaan.
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa cago jiid ka muujiyay ka qaybgalka shirka Muqdisho, waana xilli ay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyeen inaanu doonayn in horumar laga sameeyo shirka wadashiga ee looga hadlayo doorashooyinka dalka.
Kan-xigaFayriska Corona oo deg-deg ugu faafay...
Kan-horeMadaxweyne Deni oo la kulmay Wakiilka...
59,515,090 unique visits